Oneplus အိုင်ကွန်များ - ဤသည်မှာ OnePlus သည်၎င်း၏နားကြပ်အသစ်များကိုကြေငြာလိုက်သည် Androidsis
El OnePlus X ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ အာရှ startup မှဖုန်းအသစ်သည်အလွန်ရှင်းလင်းသောရည်မှန်းချက်ရှိသည် - အလယ်အလတ်တန်းစားဈေးကွက်တွင်စိုးမိုးရန်။ သို့သော်များစွာသောသင်မသိသေးသောအရာတစ်ခုရှိသည်။ OnePlus သည်ဖုန်းများဖြင့်ငွေရှာရုံမျှဖြင့်၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဆက်စပ်ပစ္စည်းများရောင်းချရန်ဖြစ်သည်။ Y အသစ် OnePlus အိုင်ကွန်နားကြပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် option တစ်ခုဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် OnePlus X ၏တင်ဆက်မှုနှင့်အတူ startup သည်ကမ္ဘာကို၎င်း၏နားကြပ်အသစ်များကိုပြသရန်အခွင့်အရေးယူခဲ့သည်။ OnePlus အိုင်ကွန်များသင်၏စတိုးဆိုင်၌သင်ရောင်းပြီးဖြစ်သော JBL နားကြပ်ထဲသို့ထည့်မည်။ OnePlus Icons များကိုစပွန်ဆာလုပ်ခြင်းထက်ဘာကောင်းလဲ သင့်ရဲ့နားကြပ်များနှင့်ပြိုင်ဆိုင်မှုများ၏စမ်းသပ်မှုများစွာသောစက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများသည်သင်၏မျက်စိနားမထောင်စမ်းသပ်မှု!
OnePlus Iphone အပါအ ၀ င်အမျိုးမျိုးသောနားကြပ်များကိုစမ်းသပ်ရန်စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများအတွက်မျက်စိကန်းသောစစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်သည်
ဒီနားကြပ်အသစ်ကတစ်ခုပါလိမ့်မယ် ၉.၉၉ ယူရိုစျေးနှုန်း, OnePlus မှစျေးအကြီးဆုံးနားကြပ် (JBL E1 + သည်ယူရို ၃၉.၉၉) ဖြစ်သည်။ သူတို့၏သံခမောက်အသစ်များကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်လွှင့်ရန်ဟယ်လ်စင်ကီဂီတစင်တာ (ဖင်လန်) တွင်မျက်စိကန်းသောစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
ဤထူးဆန်းသောမျက်စိကန်းသောစစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်ရန်အတွက်သူတို့သည်ဂီတအထူးပြုလုပ်အားပေးသူများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောနားကြပ်အစုံသုံးခုကိုစမ်းသုံးခွင့်ပေးခဲ့သည်။ ယူရို ၁၀၀ ကုန်ကျမည့်အမည်မသိသောတစ်ခု၊ ယူရို ၃၀၀ နှင့်နောက်ဆုံးတွင် OnePlus Icons နားကြပ်များပါသောအခြားမော်ဒယ်တစ်ခု။
ဗွီဒီယိုတွင်ဤဂီတကျွမ်းကျင်သူများသည်မော်ဒယ်သုံးမျိုးကိုစမ်းသပ်နေကြောင်းတွေ့ရပြီး၊ သူတို့မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း OnePlus Icon နားကြပ်များသည်အကောင်းဆုံးရလဒ်များကိုပေးခဲ့သည့်အရာများဖြစ်သည်။ သင်၏နားကြပ်အသစ်များကိုပူပြင်းသည့်ကိတ်မုန့်များကဲ့သို့ရောင်းရန်များစွာအထောက်အကူပြုနိုင်သည့်အမှန်တကယ်လိမ္မာပါးနပ်သောကြော်ငြာတစ်ခု။
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျငါကဲ့သို့သောအခြားအမှတ်တံဆိပ်ယုံကြည်စိတ်ချရန်ကြိုက်တတ်တဲ့ RHAပြီးပြီ သူကသူ့အားအစွမ်းထက်တဲ့ RHA MA750i နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသဘောကျခဲ့တယ်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိဆန်းစစ်နေသောနောက်ဆုံးပေါ် RHA T20 နှင့်မကြာမီကျွန်ုပ်တို့အားပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ကိုသင်ပြပါလိမ့်မည်။
ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုအသိအမှတ်ပြုရမယ် OnePlus မှယောက်ျားများသည်ကြီးစွာသောအလုပ်တစ်ခုလုပ်သည် ဒီဗီဒီယိုရဲ့ရလဒ်ကိုကြည့်နေတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်မသမာမှုများရှိကြောင်းနှင့်ရွေးချယ်ထားသည့်လူများသည်ဂီတ၏အရည်အသွေးအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။
အခုကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးရဖို့လိုတယ် အသစ်က OnePlus အိုင်ကွန်နားကြပ်ကြိုးစားပါ တရုတ်ထုတ်လုပ်သူကဒီနားကြပ်ကောင်းကိုတကယ်ရပြီလားဆိုတာကြည့်ရအောင်၊ ယူရို ၆၀ မရောက်နိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ OnePlus ကမျိုးဆက်သစ် Oneplus Icons နားကြပ်တွေနဲ့ကြီးမားတဲ့ပေါက်ကွဲမှုကိုပေးနိုင်တယ်လို့ငါထင်တယ်။
သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ? ဒီနားကြပ်ကဒါကိုကောင်းတယ်လို့သင်ထင်သလား ၄၉.၉၉ ယူရိုကုန်ကျမလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » OnePlus သည် Icon နားကြပ်အသစ်ဖြင့်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးအသုံးပြုသူတုံ့ပြန်မှုများကိုထုတ်ပြန်သည်
သင်၏ Android အတွက်အကောင်းဆုံးဟယ်လိုဝင်း icon များကို Download လုပ်ပါ
Nexus 6P ဟာ iFixit မှယောက်ျားတွေရဲ့အဆိုအရပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အလွန်ခက်ခဲတဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်